Gadra nitsoaka tao Betroka: mpandraharaha fonja iray naiditra am-ponja | NewsMada
Gadra nitsoaka tao Betroka: mpandraharaha fonja iray naiditra am-ponja
Par Taratra sur 02/08/2021
Nampidirina am-ponja vonjimaika ao amin’ny fonjan’i Betroka sady naato amin’ny asa maha mpandraharaha fonja ny iray voarohirohy amin’ny fanomezan-dalana ny famoahana ireo voafonja telo lahy ny 16 jolay teo.
Natsahatra amin’ny asany amin’ny maha mpandraharaha fonja kosa ny iray hafa. Ireo ny tapaka taorian’ny fanadihadiana ny raharaha. Mbola mitohy hatramin’izao ihany koa ny fikarohana ireo gadra nanararaotra nitsoaka tamin’ny asa nataony ivelan’ny fonja.
Tsiahivina fa voaheloka mandra-pahafaty noho ny raharaha famonoana nahafaty solombavambahoaka teo aloha tao Amboasary Atsimo i Sambo Francois, i Mara Fegnona ary Ratalata Philbert, ny taona 2013 tao Tsivory.
Herinandro vitsy lasa izay, navoaka ny fonja hanatanteraka asa ivelan’ny fonja izy telo lahy ireo. Teo am-panatanterahana izany anefa, nanararaotra nandositra ireto farany ary mbola tsy hita hatramin’izao. Manoloana ny tranga, nahetsika avokoa ireo mpitandro filaminana ao Betroka, nohamafisina ihany koa ny fiambenana ny fonja.